Socket PPR ịgbado ọkụ igwe
A na-eji ngwongwo njikọ oghere eji arụ ọrụ maka PP-R, Pee, PERT, PB ọkpọkọ na akwa akwa. Uru >> Ihu igwe ihe ngosi di iche iche di iche iche, dika ihe di iche di iche, o nwere ike idozi onodu ogugu. >> Otu ụdị nke mbughari na-akwado nkwụnye, ịgbado ọkụ na multi-direction. >> A set nke raara onwe ya nye spana, adaba iji na-ebu. >> Electronic nwere ọgụgụ isi akara usoro, ọ nwere ike na-aghọta akpaka okpomọkụ akwụ ụgwọ. >> Heating nkeji oge sig ...
HDPE NT FKWU AKWUSKWỌ FUSION
Mpempe akwụkwọ data teknụzụ: igwe ncha igwe eji arụ ọrụ, ịkpụchasị arụ ọrụ na ịrụ ọrụ nke ọma. mfe ibu. Ibu arọ nke igwe dum bụ kilogram 7.5. Modeldị 220 nwere ike belata ọkpọkọ na nso nke 15mm ~ 220mm na dayameta. Mgbidi mgbidi nke ọkpọkọ ígwè bụ 8mm, ọkpụrụkpụ nke ọkpọkọ plastic bụ 12mm, na ọkpụrụkpụ nke igwe anaghị agba bụ 6mm. Enweghị mkpọtụ na enweghị ọkụ n'oge ịcha. Ebe a na-egbutu ala dị larịị na-enweghị ntụpọ, ihe nrụpụta ahụ adịghị arụ ọrụ, na ọnwụ ọsọ bụ ...
Plastic Aka Extruder
Mpempe akwụkwọ data teknụzụ: Modeldị: SDJ3400 Voltaji: 220V Extruding Motor Power: 1300W Metabo Ikuku Ikuku Ikuku Ike: 3400W Lesiter Welding Rod Heating Power: 800W Extruding Volume: 2.5kg / h Welding Rod Diamita: ф3.0mm-4.0mm, 5.0mm can be ahaziri Aka extruder egbe na-ejikarị maka ịgbado ọkụ HDPE, PP, PVDF na ihe ndị ọzọ na-agbaze agbaze na ọrụ ndị dị ka tankị mmiri plastik, ọkpọkọ plastik, akpa plastik na akwụkwọ plastik. Model SDJ3400 voltaji 220V ± 5% Frequency 50 / 60Hz Hot Air ikuku mmiri ...
Ngwa na Modeldị Njirimara: SUDG800 Voltaji: 220V / 110V Ike: 800W / 1000W Frequency: 50 / 60Hz Welded Ihe: Pee / PP / PVC / EVA / ECB Welded Material Butness ： 0.2mm-1.5mm Silicon pressure roller and steel pressure roller nhọrọ. Ọla kọpa na-ekpo ọkụ na nchara dị nchara bụ nhọrọ. Ugboro abụọ ọkụ wedge ndabere na otu ọkụ wedge nhọrọ. Mpempe akwụkwọ data teknụzụ: Model SUDG800 Nkọwapụta Geomembrane ịgbado ọkụ igwe voltaji 220V (ahaziri nnabata) Frequency 50 / 60hz Power 8 ...
Ngwa na Njirimara Electrofusion ịgbado ọkụ igwe kwesịrị ekwesị maka ijikọ pipụ ọkpọkọ na akwa akwa na njikọ nke ejiri gas na mmiri. 1.Design na dị ka ISO12176 electro-fusion welder international standard. 2.High larịị MCU na-eji dị ka akara isi, onwem na LCD ngosi, niile ịgbado ọkụ kwa nwere ike na-egosipụta. 3.Light arọ, mfe ọrụ. 4.By ezigbo oge nyochaa ọnọdụ weld, enwere ike ịkwụsị usoro ịgbado ọkụ n'oge dị mkpirikpi. 5. Wuru na ...
Ngwa na Njirimara 1. elddị ịgbado ọkụ: weld na ntanetị na-agbagharị. PLC aka-panel akara usoro, ike na-akpaghị aka ukpụhọde kpo oku okpomọkụ, oge na nsogbu dị ka kwa nke ihe n'okpuru nhazi., Adabara weld na inyefe thermoplastic efere mere nke HDPE, eyi, ịkwanyere, PVDF, PPN, PPH 2.Control system Siemens PLC, 7-inch agba ihuenyo mmetụ-Siemens. 3.Brand-ọhụrụ ike etiti, ukwuu pụrụ ịdabere na nnyefe usoro, mụ na-arụ ọrụ na elu Pee ...